Toyota Allion 2012 (#654537) ကို Mayangone မြို့နယ်တွင်ရေ... | CarsDB
Lot Number: #654537
1800CC(valvematic);alloy;volume control;8 airbag;
Seat moter;JP AUC grade 4B. Good condition.
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Ko Zar Ni မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Allion 2012 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။